प्रितमलाई दुर्गा प्रसाईंको धम्की- साला डाँका! तेरो तीन इन्च छाला सर्ने गरी हान्छु (अडियोसहित) - Sidha News
प्रितमलाई दुर्गा प्रसाईंको धम्की- साला डाँका! तेरो तीन इन्च छाला सर्ने गरी हान्छु (अडियोसहित)
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीका मिडिया संयोजक प्रितम सुवेदीलाई दुर्गा प्रसाईंले टेलिफोनमा धम्की दिएका छन्। झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक प्रसाईंले सुवेदीलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की दिएका हुन्।
उनले मापदण्डको कुरा उठाउँदा सुवेदीले तपाईंले मापदण्ड पूरा गरेको के आधार छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। फेरि आक्रोशित हुँदै प्रसाईं भन्छन्, ‘तँ को होस् मापदण्ड भन्नलाई। त कानुन, राज्य होस् कि? मैले संविधानमा रहेर देशमा उद्योग धन्दा खोल्न पाउँछु।
तँ मलाई चोरबाटो भन्ने। मेरो अगाडि परिस् भने म तलाई चोरबाटो देखाइदिन्छु। तेरो बाउआमा राखेर तँसँग कुरा गर्छु। तेरो बाउआमा काँ छन्? त धेरै नबोल भाइ। भेटे भने तेरो तीन इन्च छाला सर्ने गरी हानिदिन्छु। । साला डाँका’
यो समाचार नेपाल समयबाट साभार गरिएको हो ।